Ikhaya Amasu Okuqhamuka Forex 5 Izinhlobo Zamasu Okuhweba Kwe Forex Breakout Asebenzayo
amasu Breakout ezinye izinhlobo eziningi ngempumelelo amasu forex Ukuhweba. Kungenxa yokuthi okuphumayo ngokuvamile kusekelwe umfutho. I-Momentum imvamisa iholela ekuhambeni kwamanani entengo esondela endaweni eyodwa. Ukuhweba ngehlukaniso kuvame ukushesha futhi kusebenza kakhulu, intengo ehambayo kude ngesikhathi esifushane kakhulu.
Sihlanganile 5 amasu wokuqhekeka asebenza kakhulu futhi angakhiqiza inzuzo enkulu uma isetshenziswa esimweni esifanele sokuhweba. Lezi zinhlelo zokuqhekeka zingasetshenziswa ezimeni ezithile zemakethe lapho ukuqhekeka kungenzeka khona. Lokhu kungakuvumela ukuthi uthengise imakethe ngezimo ezahlukahlukene zemakethe ezingaba namandla okuhweba okuphuma phambili.
I-ATR Momentum Breakout Strategy Strategy
1 I-ATR Momentum Breakout Strategy Strategy
1.1 Iziteshi ze-ATR
1.2 Umkhondo we-AVQ
1.5 Thenga ukusethwa kwezohwebo
1.6 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
2 Icebo le-SAR Cloud Breakout Forex Ukuhweba
2.2 I-SAR Oscillator
2.5 Thenga ukusethwa kwezohwebo
2.6 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
3 I-Fisher Gator Reversal Breakout Forex Ukuhweba Isu
3.2 Kugcwaliswe i-Ribbon
3.3 I-FBS Fisher
3.4 Isu Lokuhweba
3.6 Thenga ukusethwa kwezohwebo
3.7 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
4 I-ZigZag Swing Breakout Forex Ukuhweba Isu
4.1 Isikhombi seZigzag
4.2 50 Isikolo sebanga eliphezulu
4.3 oscillator Awesome
4.4 Isu Lokuhweba
4.6 Thenga ukusethwa kwezohwebo
4.7 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
5 I-EMA MACD Congestion Breakout Forex Ukuhweba Isu
5.1 Izimpawu ze-Exponential Moving Averages Signals
5.2 MABD Omdala
5.5 Thenga ukusethwa kwezohwebo
5.6 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
6 Amagama wokugcina
Enye yezindlela ezilula zokuthola imali kwi-forex ukuthengisa ngamandla. Empeleni, kukhona abathengisi abangaphenduka amakhulu ambalwa amadola babe ngamakhulu ayizinkulungwane ezimbalwa zamaRandi ngokuhweba nje okuyisisekelo sokuhweba. Amasu wokuhweba ama-Momentum ayasebenza futhi angangenisa imali.
Isizathu sokuthi abathengisi abaningi bahluleke ukuhweba ngamandla kungenxa yokwesaba ukuxosha intengo futhi kunjalo. Kunezimo ezithile lapho amakhandlela abonakala ekhombisa umfutho omuhle abe esebuyela emuva kwikhandlela elilandelayo. Noma kunjalo, futhi kunezimo eziningi lapho ukuhweba ngamandla kungaholela esigabeni sokukhulisa ngokungazelelwe noma umkhuba. Abathengisi abakwazile ukungena emakethe njengoba umfutho uqalile bangajabula ukuthi benze njalo. Lokhu kuhweba kuvame ukuletha inzuzo enkulu ngesikhashana nje.
Isihluthulelo sokwenza inzuzo lapho ukuhweba ngomzuzu wokusetha kukhomba ikhandlela elisezingeni elifanele. Lokhu kungenxa yokuthi abathengisi abaningi bangamane babheke ikhandlela bese benquma ngokungagudli ukuthi ikhandlela likufanele ukuthatha noma cha. ngokuvamile, ukuhaha kuzobangela bathathe ukuhweba kukhandlela okubonakala sengathi alunamandla ngemuva kwalo. Abanye bangahweba ngokungakhathali amasu asemakethe emakethe enokuzithoba okuphansi lapho amakhandlela evezwe kabi ngenxa yobubanzi bokuzithoba obuphansi.
I-ATR Momentum Breakout Forex Ukuhweba Isu kuyindlela ehlelekile yokuhweba umfutho onomsebenzi omncane wokuqagela. Inika ukucaciswa okucacile kokuhweba okusekwe emithethweni evumela abathengisi ukuthi bahlunge amakhandlela aphansi wesikhashana.
Isilinganiso Sokubumbana Kweqiniso (ATR) ngesinye sezinkomba ezinhle kakhulu ezisetshenziselwa ukunquma ukuguquguquka kwesimo. Empeleni, i-ATR uqobo iyindlela ethile yokuguquguquka kwesimo. Lokhu kungenxa yokuthi i-ATR ilinganisa ububanzi obujwayelekile bekhandlela. Izimo zemakethe eziguquguqukayo ezijwayelekile zibonisa ukuthi zinamakhandlela amabanga amakhulu ngenkathi izimo zemakethe eziphansi zokushintshashintsha imvamisa zinama-ATR aphansi.
Isikhombisi seziteshi ze-ATR luhlobo lwesiteshi noma inkomba ye band esekwe kwi-ATR. Idonsela umugqa ophakathi nendawo ophakathi nendawo. Imigqa eshaya ngesilinganiso eshukumayo ihlelwe ngokususelwa kukuphindaphindwa kwe-ATR.
Iziteshi ze-ATR zingasetshenziswa ukunquma izimo ezisetshenziselwa ukwanda noma ukweqisa. Amanani angaphandle kwemigqa yangaphandle angabhekwa njengokuthenga kakhulu noma ukuwedlula ngaphezulu.
Noma kunjalo, iziteshi ze-ATR nazo zinhle ukukhomba umfutho. Amakhandlela ngokujwayelekile ahlala eduze komugqa ophakathi. Amakhandlela asondele kakhulu emigqeni yangaphandle ngokuvamile akhombisa ukuqina.
I-AVQ Trend inkomba yesikhombimanje esuselwa ku-A average Directional Movement Index (I-ADX).
Lesi sikhombisi sihle kakhulu ekuboneni izindlela zesikhashana kanye namandla. Kuyaphendulwa kakhulu futhi kungasheshe kukhombe ukubuyela emuva kwesimilo sesikhashana.
Imboza imigqa ngaphezulu kwezibani zamakhandlela ukukhombisa ukuqondiswa kwendlela. Lokhu kusetha, inkomba idlulisa imigqa yama-magenta ngaphezulu kwamakhandlela noma nini lapho ikhomba khona umkhuba wesikhashana we-bullish, kanye nemigqa ephuzi noma nini lapho ikhomba umkhuba wesikhathi esifushane we-bearish.
Leli su liyisu lesikhashana elisuselwa kuziteshi ze-ATR.
Amakhandlela anomfutho oqinile futhi aqhamuke esigabeni sokukhubazeka ngokuvamisile angavala kakhulu kude ne-midline. Amakhandlela avale ngaphesheya komugqa oluhlaza wesibonakaliso se-ATR Channels angaqinisekisa ukuphuma kwalesi sikhathi. Lezi zinhlobo zamakhandlela ezibonisa ukungena okusebenzayo.
Umkhuba wesikhathi esifushane noma umfutho bese uqinisekiswa yimigqa ye-AVQ Trend.
Ukwehlukaniswa kwamakhandlela kusuka kuzimpawu eziluhlaza ze-ATR Channels imigqa yesikhathi esifushane yenkomba ye-AVQ kufanele kuqinisekisane.
ex4 (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 15-umzuzu, 30-umzuzu kanye namashadi wehora-1
Intengo kufanele ivalwe ngenhla komugqa ophezulu oluhlaza wesibonakaliso se-ATR Channels ekhombisa ikhandlela lokuqhuma okungatheni.
Isikhombisi se-AVQ Trend kufanele simboze umugqa we-magenta kwizibani zamakhandlela ezibonisa inkambiso yesikhathi esifushane.
Lezi zinkomba ze-bullish kufanele zihambisane kakhulu.
Setha ukulahleka kokumiswa okuncane ngezansi komugqa wewolintshi ongaphezulu wesikhombisi seziteshi ze-ATR.
Vala ukuhweba lapho nje ikhandlela livala ngaphansi komugqa wewolintshi ongaphezulu wesibonakaliso seZiteshi ze-ATR.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-AVQ Trend igquma umugqa ophuzi kukhandlela.
Intengo kufanele ivale ngaphansi komugqa ophansi oluhlaza wesikhombi se-ATR Channels ekhombisa kungenzeka ukuthi ikhandlela likwazi ukuqhuma.
Isikhombi se-AVQ Trend kufanele simboze umugqa ophuzi kumakhandlela akhombisa ukuthambekela kwesikhashana se-bearish.
Lezi zinkomba ze-bearish kufanele zihambisane kakhulu.
Setha ukulahleka kokumiswa okuningana ngaphezulu komugqa wewolintshi ophansi wesikhombisi seziteshi ze-ATR.
Vala ukuhweba lapho nje ikhandlela livala ngenhla komugqa wewolintshi ophansi wesikhombisi seChannels.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho inkomba ye-AVQ Trend inwebela umugqa we-magenta ekhandlela.
Leli su isu elihle isu lokusekela umfutho. Amasu we-Momentum ayasebenza. Empeleni, amakhandlela asezingeni eliphakeme ngokuvamile ayeba nomphumela wokuhweba okuzuzayo. Ukhiye ukukhomba ukugqashuka okukhulu kakhulu. Leli qhinga lihlinzeka ngendlela eqondile yokuhlonza ukwephulwa komfutho.
Iningi lezimpawu zokuhweba ezikhiqizwe yileli hlelo lizoholela ekuvuneni okukhulu. Lokhu kunikeza isilinganiso esiphakeme sengozi yomvuzo.
Kukhona nezimo lapho ikhandlela lokungena elivala ngaphesheya komugqa oluhlaza wesikhombi we-ATR akulona ikhandlela elinamandla. Kusewukungena okusebenzayo inqobo nje uma isenzo sentengo sikhombisa umfutho.
Icebo le-SAR Cloud Breakout Forex Ukuhweba
Enye yezindlela ezisebenziseka kahle zamasu okuqhekeza ukuqhekeza kusuka ekubuyiselweni emuva noma ekuhlanganiseni. Lokhu kungenxa yokuthi ukubuyisa kanye nokuhlangana kuhlobo oluthile lokuphazamiseka kwemakethe.
Imakethe inezigaba ezimbili, esinye isigaba sokunwebeka kanti esinye yisigaba sokuzenzela. Amamaki ajikeleza phakathi kwalezi zigaba ngokulandelana. Amathrendi aqinile kanye nomfutho kuhlotshaniswa nesigaba sokukhulisa. Ngalesi sigaba, imakethe yayihamba ngokushesha iqonde ngakolunye uhlangothi. Bese, ngemuva kwesigaba sokunwetshwa, ivolumu livame ukwehla njengoba ababambiqhaza bemakethe bangaqala ukukhiya inzuzo futhi abanye abathengisi babona intengo iphakeme kakhulu noma iphansi kakhulu. Lokhu kuholela ekuguqukeni kancane kancane. Noma kunjalo, lokhu kuguqulwa akuvamisile. ngokuvamile, inqobo nje lapho ukuthambekela kwesikhathi eside kusendaweni, nezinqubo ezinkulu zesikhathi sehora azikanyelwa kakhulu, imakethe imvama ukuphinda ibuye futhi iqale esinye isigaba sokunwebeka iya ngokuqondisa okufanayo nokuthambekela kokuqala. Lokhu kuphawula ukuphela kokubuyiselwa noma ukuxinana, zombili eziyizigaba zokuqedwa.
Okuza ngemuva kwesigaba sokuthengwa kwempahla kuyajabulisa impela njengoba kungaba esinye isigaba sokwanda. Kuphinde kube yisigaba lapho ukunyuka kwamanani okuqondisa okukodwa kwenzeka khona, futhi umfutho unamandla. Lesi sigaba sinikeza amathuba okuthola inzuzo emakethe. Abathengisi abakwazi ukungena ekuqaleni kwalesi sikhathi esisha bavame ukuzuzwa ngokuthola inzuzo enkulu.
Isu le-SAR Cloud Breakout Forex Ukuhweba ngenye exhaphaza lomjikelezo. Kuhweba ngokuqhekeka kusuka ekusekelweni ekubuyiselweni emuva noma ekuvumelaneni okuvame ukuqala kokuthambekela okunamandla okusekelwe kumfutho.
Isikhombi se-Forex Cloud inkomba yangokwezifiso eyenzelwe ukukhomba umkhuba wesikhathi eside nendawo engabhekwa njengokusho komkhuba.
Le nkomba imaka indawo yentengo esetshenziswayo ngokufaka umthunzi endaweni. Ngesikhathi somkhuba we-bullish, le nkomba ibizobe ibopha indawo engezansi kwentengo ngamachashaza kadaka. Ngokwesinye isandla, ngesikhathi se-bearish, indawo ebunjiwe idluliselwe ngaphezulu kwentengo futhi amachashazi anemibala ebomvu. Lokhu kufanekisela izincazelo, kanye nokwesekwa noma ukumelana okunamandla.
Inkomba futhi idonsa umugqa wamachashaza wesiliva ukumela ukusekelwa okuphikisayo noma ukumelana kusuka kuthrendi. Ngesikhathi semakethe ebanzi, intengo yayivame ukugoba phakathi kwendawo ene-shaded nomugqa onamachashazi. Noma kunjalo, ngesikhathi sokuqala komfutho, intengo izophuma emgqeni onamachashazi bese iqala inkambiso entsha enkambisweni yendlela ehamba phambili njengoba kukhonjiswe umbala wendawo ene-shaded.
I-SAR Oscillator yisinkomba esilandela inkomba esuselwa ku-Parabolic Stop and Reverse (I-SAR) inkomba.
Isikhombi se-SAR siyinkomba eyisisekelo esetshenziswa ngabathengisi abaningi njengesinkomba sendlela futhi njengesisekelo sokubeka ukulahleka kokumisa. Inkomba ye-SAR ibeka amachashazi eshadini lentengo ngokususelwa ekuqondeni kwendlela. Kumkhuba we-bullish, amachashazi abekwe ibanga elithile ngaphansi kwentengo, ngenkathi uku-bearish, amachashazi abekwe ngenhla yentengo. Ukulahleka kokumisa kungabekwa ngaphezu kwalawa maphuzu njengoba izitayela zibhekwa njengokuthi zihlehlise noma yinini lapho ukwephulwa kwamanani kula maphuzu.
I-SAR Oscillator ngakolunye uhlangothi isuselwa enkombeni yendabuko ye-SAR. Esikhundleni sokubeka amachashaza eshadini lentengo uqobo, inkomba ikhombisa i-histogram ewindini elihlukile. Ama-histogram amelela ibanga phakathi kwentengo namachashazi. Ama-histogram amahle akhombisa umkhuba we-bullish ngenkathi ama-histogram angalungile akhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Leli su isu lokuqhekeka elisetshenziselwa ukuqinisekisa ukuqhekeka kusuka ekubuyiselweni emuva noma ekuhlanganeni kwendlela yesikhathi eside esungulwe.
Ukuhweba leli su, kufanele siqale sikhombe ukuqondiswa kwendlela esekwe engxenyeni ebomvu yesikhombi se-Forex Cloud. Bese, silindele ukubuyiselwa endaweni eyi-shaded, okuyindawo enamandla yokusekelwa noma yokumelana. Njengoba inani lentengo libuyela kule ndawo, ukusekelwa okuphikisayo noma ukumelana okuphikisayo ngokuvamile kungasungulwa ngenxa yokubuyiselwa kancane kancane noma ukuxinana. Ama-trades athathwa ngokuya ngokuqhuma kwale migqa yokusekelwa noma yokumelana. Noma kunjalo, ukusekelwa okunamandla okuphikisanayo noma umugqa wokumelana nesibonakaliso se-Forex Cloud nakho kuzosetshenziswa njengendawo iphuzu eliyinhloko lokuphuma. Intengo kufanele ivalwe ngaphesheya komugqa wesiliva onenkomba ye-Forex Cloud ukukhombisa ukuhlukana.
Ngaphezu kwesikhombi se-Forex Cloud, i-SAR Oscillator kufanele futhi iqinisekise ukuguquguquka kwesimo. Inkambiso ekhonjiswe yi-SAR Oscillator kufanele ivumelane nokuqondisa ikhefu.
Ubude besikhathi: H4
Isikhathi Esikhethwayo Uhlaka: 15-ishadi minute
Isikhombi se-Forex Cloud kufanele siveze indawo enomthunzi we-lime ngaphansi kwentengo ekhombisa ukuthambekela kwesikhathi eside se-bullish.
Intengo kufanele ibuyele endaweni ye-lime shaded.
Intambo yokumelana ye-diagonal noma enezingqimba kufanele ibonwe.
Intengo kufanele yephule ngaphezulu komugqa wokumelana.
Intengo kufanele yephule ngaphezulu komugqa wesiliva onamachashaza enkomba ye-Forex Cloud.
Imigoqo ye-SAR Oscillator kufanele ibe yinto ekhombisa ukubuyela emuva kwemikhuba ye-bullish.
Faka i-oda lokuthenga ekugcineni kwekhandlela eliphule ngaphezulu komugqa wesiliva onamachaphaza.
Setha ukulahleka kokumisa onqenqemeni oluphezulu lwendawo ene-lime shaded yesikhombi se-Forex Cloud.
Vala ukuhweba lapho nje imigoqo ye-SAR Oscillator iba yimbi.
Isikhombi se-Forex Cloud kufanele sikhombise indawo enombala obomvu ngenhla kwentengo ekhombisa ukuthambekela kwesikhathi eside se-bearish.
Intengo kufanele ibuyele endaweni ebomvu.
Ulayini wokusekela oqondile noma ovundlile kufanele ubonwe.
Intengo kufanele yephule ngaphansi komugqa wokusekela.
Intengo kufanele yephule ngaphansi komugqa wesiliva onamachashaza wesikhombi se-Forex Cloud.
Imigoqo ye-SAR Oscillator kufanele ibe emibi ekhombisa ukubuyela emuva kwesimo se-bearish.
Faka i-oda lokuthengisa ekugcineni kwekhandlela eliphula ngaphansi komugqa wamachashazi esiliva.
Setha ukulahleka kokumisa onqenqemeni olungezansi lwendawo enombala obomvu wesikhombi se-Forex Cloud.
Vala ukuhweba ngokushesha nje ukuthi imigoqo ye-SAR Oscillator ibe nokuma.
Isu le-SAR Cloud Breakout Forex Ukuhweba Isu elingcono kakhulu ongalisebenzisa esimweni semakethe esijwayelekile sesikhathi eside.
Kusebenza kangcono uma kuqondaniswa nesethi yokuhweba yamaphethini kuhlaka oluphezulu lwesikhathi. Njengesibonelo, ukuhweba okuthengiswayo eshadini le-NZDUSD lemizuzu engu-15 ngaphezulu kuyifomethi yefulegi le-bearish eshadini lehora-4.
Kudinga isineke esikhulu ukulinda amaphethini entengo ukuba akhe izikhathi ezibekiwe eziphakeme. Futhi kudinga ikhono kanye nomkhuba omningi wokufunda kahle iphathini yokuhweba kodwa uma usuyifundile, iyithuluzi elihle ongalisebenzisa njengesiqinisekiso kuleliqhinga.
I-Fisher Gator Reversal Breakout Forex Ukuhweba Isu
Ukuqhekeka kuvame ukuba uphawu lokuphindisela emuva lokubuyela emuva kwesimo. Lokhu kuvame ukubonwa kwimakethe ethambekela ngokusobala ngokusekelwa okuchaziwe nokumelana.
Ukuqhekeka okuvela kusekelo noma ukumelana kwe-diagonal kuvame ukukhombisa ukuthi imakethe ebelokhu yakha isilinganiselo esiphakeme kakhulu nesiphansi noma eliphakeme kakhulu neliphansi isivele yephule umkhuba onjalo. Ukuqhekeka okunjalo kuphethini lokuthambekela kuvame ukukhombisa into eyodwa - ukuphela komkhuba. Lapho umkhuba usuphelile, kunezimo ezimbili kuphela ezingavela, noma imakethi izoba ngaphambi kokumaketha okulandelayo okuzayo, noma imakethe izobuyela emuva ngokushesha.
Uma kuthengisiwe, isimo sokuqala sivame ukuholela kunoma yikuphi ukuhweba okungekho emthethweni, ukulahlekelwa okuncane noma inzuzo encane. Ngokwesinye isandla, uma imakethe kuvela ukubuyela emuva kwesimanje, izimo ezinjalo zivame ukuholela ekuzuzeni okukhulu. Ukubuyela emuva kwendlela yokuhweba kuyindlela yokuhweba esebenzayo. Inikeza abathengisi ithuba lokuthola inzuzo enkulu ngengozi efanelekile.
Isikhombi se-R Gator siyinkomba yesikhashana yangokwezifiso esekelwe kucebo le-Alligator kaBill William. Kwakhelwe emcabangweni ofanayo wokusebenzisa ukunyakaza kwesethi ethile yokuhambisa okulinganayo ukuhlola ukuthi imakethe iyashintsha yini, ukunwebeka, inkontileka noma ukubuyela emuva.
Isikhombi se-R Gator sibonisa imigqa emithathu eyisilinganiso eshukumayo eshadini lentengo, sifana nenkomba ejwayelekile ye-Alligator. Isikhathi esifushane sokuhambisa isilinganiso sinombala obomvu, isilinganiso esiphakathi nendawo esihamba phambili sinombala oluhlaza okotshani, kuyilapho isikhathi esijana sesihambile sinombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Imakethe kuthiwa iyanda noma ihamba phambili lapho imigqa iphuma, ngenkathi imigqa enenkontileka iyinkomba yemakethe yenkontileka ejwayelekile yokubuyiselwa. Amamakethe anemigqa ehamba ngesilinganiso ewela ngaphesheya ayinkomba yemakethe ehlehlisayo.
Umehluko phakathi kwenkomba ejwayelekile ye-Alligator nenkomba ye-R Gator ukuthi i-R Gator yenziwe ngokwezifiso ukukhiqiza ukubuyela emuva kwezimpawu ngaphambili kakhulu kwesikhombi se-Alligator.
Isikhombi esigcwalisiwe se-MA Ribbon singesinye inkomba yemikhuba esekelwe kumaphakathi kokuhambisa.
Sakhiwa izilinganiso ezimbili ezinyakazayo, enye imele isikhathi eside kanti enye isikhashana esifushane. Isikhombi sivele sigcwalise isikhala phakathi kwemigqa emibili evamile yokuhamba ukukhombisa ngokusobala inkomba yothambekele.
Isikhathi esifushane sokuhambisa umugqa ophakathi kuzohlala ngaphezulu kwesikhathi esijikeleze umugqa ojwayelekile ngesikhathi sokulinganisa kwe-bullish, ngenkathi ihlala ngaphansi kwesikhathi eside ihambisa umugqa ojwayelekile ngesikhathi se-bearish. Ama-Crossovers phakathi kwemigqa emibili evamile yokuhamba akhombisa ukubuyela emuva kwesimo.
Isikhombisi se-FBS Fisher siyinkomba ye-oscillating esetshenziselwa ukunquma ukuqondiswa kwendlela yokusebenza kanye namandla endlela.
Le nkomba ikhombisa ukuqondiswa kwethrendi ngokubonisa imigoqo ye-histogram. Amabha amahle ahamba ngokujwayelekile akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish.
Okunye okubonisa inkomba ye-FBS Fisher ukuthi imigoqo ishintsha imibala noma nini lapho ithola umkhuba oqinisayo noma obuthakathaka. Imakethe ethambisayo inemigoqo ye-histogram eyigolide enemibala. Noma kunjalo, lezi zibha ziguqula imibala noma nini lapho inkomba ithola ukuthambekela okuwohlisayo. Emakethe yensiza, ukuthambekela kokuwohloka kuzokhonjiswa ngemigoqo ebomvu, ngenkathi usemakethe ye-bearish, ukuthambekela kokuwohloka kuzokhonjiswa ngemigoqo yelimu.
Leli su lisebenzisa ukuguqulwa kwezinkomba ezintathu ezingenhla ukuze kuqinisekiswe ukubuyela emuva kwesimo okusekelwe ekuqhekekeni kwelektha noma kweleveli yokuphikiswa okuvela kuthrendi yangaphambilini.
Ukuhweba leli su, ukwesekwa noma ukumelana nemikhuba yangaphambilini kumele kubonakale ngokucacile. Kuhle futhi ukusebenzisa ukusekelwa noma ukumelana okungaphezulu kakhulu njengoba lokhu kuvame ukuthi kube nezingqinamba ezimbalwa endleleni njengoba ukuhweba kuqhubeka.
Izinkomba-ke kufanele ziqinisekise inkomba yokubuyela emuva kwendlela. Ama-Rator we-Rator ashukumisayo kufanele ahlehlise futhi aqale ukukhipha indlela eya lapho kuthambekela khona okusha. Imigqa yesikhombisi ye-MA Ribbon Egcwalisiwe kufanele futhi iqale uku-crossover ekhombisa ukuthi umkhuba wesikhathi esiphakathi manje useqala ukubuyela emuva. Ekugcineni, imigoqo ye-FBS Fisher inkomba ye-histogram kufanele futhi iqinisekise bobabili ukuqondiswa kwendlela namandla amandla enkambiso entsha.
Ukuvunyelwa kwezinkomba njengoba kushiwo ngenhla kumele kuhambisane nokuqhekeka okungaphezulu kosizo noma umugqa wokumelana.
I-rib rib igcwalisiwe.89.21.ex4
Isikhathi se-MA1: 24
Ulayini wokumelana kufanele ukhonjwa ngokusobala.
Imigqa ye-R Gator kufanele iqale ukukhuphuka futhi iphume ngentambo ebomvu engenhla, umugqa oluhlaza phakathi nendawo nolayini oluhlaza okwesibhakabhaka ngezansi.
Isikhombi se-MA Ribbon Fgcwalisiwe kufanele siqale ukukhuphuka ngentambo ye-lime iwele ngaphezulu komugqa obomvu.
Inkomba ye-FBS Fisher kufanele iphrinte imigoqo eluhlaza eluhlaza ekhombisa ukuthambekela kwe-bullish.
Ikhandlela kufanele liphule ngaphezulu komugqa wokumelana.
Vala ukuhweba lapho nje ikhandlela livala ngaphansi kwemigqa Egcwalisiwe ye-MA Ribbon.
Ulayini wokusekelwa kufanele ukhonjwa ngokusobala.
Imigqa ye-R Gator kufanele iqale ukukhuphuka futhi iphume ngentambo ebomvu engezansi, umugqa oluhlaza ophakathi nendawo nomugqa oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu.
Isikhombisi se-MA Ribbon Fgcwalisiwe kufanele siqale ukukhuphuka ngentambo ye-lime iwele ngaphansi komugqa obomvu.
Inkomba ye-FBS Fisher kufanele iphrinte imigoqo emibi eluhlaza ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Ikhandlela kufanele liphule ngezansi komugqa wokusekela.
Vala ukuhweba lapho nje ikhandlela livala ngenhla kwezintambo ezigcwalisiwe ze-MA Ribbon.
Leli su liyindlela yokusebenza enhle ongayisebenzisa ngesikhathi sokuphambuka kwezinto.
Indlela engcono kakhulu yokusebenzisa leliqhinga njengokuqinisekisa kokusethwa kokubuyela emuva kokusekelwe kusekelo lwendabuko noma ukuqothuka kokumelana. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bahlunge ukusetha okuphansi kwamathrendi okuphansi.
Enye indlela yokusebenzisa leliqhinga injengesithwebuli. Amashadi namabhuthi wohlobo lwemali olwedlula lezi zimo ezingenhla angabhekwa njengokuphambuka kokuphambuka kokushintshana uma ngabe kukhona impela uxhaso noma umugqa wokumelana osusondele ekuphulweni.
I-ZigZag Swing Breakout Forex Ukuhweba Isu
Amasu wokusekela kanye nawokulwa nokuqothuka amasu ayisisekelo asetshenziswa abathengisi. Kungenxa yokuthi ukwesekwa nokumelana nokuqalwa kokuhweba okuqhamuka kumane kusebenza.
Noma kunjalo, ukwesekwa kwendabuko nokumelana nazo akuyona ukuphela kwezindawo lapho abathengisi bangabheka khona kokusethwa kokuhweba okungahle kube khona. Swing highs and swing lows futhi yizindawo ezinhle zokuhweba okuqhekeka. Lokhu kungenxa yokuthi ukushushuluza phezulu kanye nokugoba ukushibilika nakho kungathathwa njengokusekelwa noma ukumelana okuvundlile.
Abahwebi ababedayisa ngokubuyela emuva kokujikisa phezulu noma ngokuswayipha okuphansi kungenzeka ukuthi babeke ukulahleka okuphezulu ngaphezulu kokujikisa phezulu noma ngaphansi kokujula okuphansi. Ukuqhekeka okuvela kula maphuzu kuvame ukuholela ekuhambeni okukhulu kakhulu ngenxa yalokhu kulahleka kokumisa kukhishwe.
Enye inzuzo yokuhweba ngomshini ophakeme noma ngokuswayipha osezingeni eliphansi ukuthi izitayela zingabonakala kalula ngokumane ubheka iphethini yokuphakama noma ukushibilika kwezilokazana.. Isenzo samanani nabahwebi bethadi abanqunu kungachaza ukuthambekela kwemakethe njengokuphakama okukhulu nokujikisa okuphansi okuhlala kukhuphuka kuthrendi ye-bullish, noma izibambo eziguqukayo eziphakeme nezifunga ezihlala ziwela kuthambekela lwe-bearish. Abahwebi abathengisa ohlangothini lwesitayela olususelwe kulokhu kucatshangwa bavame ukuba nokuhweba okuphezulu okungenzeka kunalabo abathengisa ngokungakhathali ngokungakhathalekile ukuthi imakethe iyashintshana noma ibanzi.
Inkomba yeZigzag mhlawumbe ingenye yezinkomba ezingaphansi kakhulu. Noma lula, kusesebenza kakhulu abathengisi abangakusebenzisa ukuhweba izimakethe.
Isikhombi se-Zigzag sithola amaphuzu aguqukayo eshadini lamanani lapho intengo ihlehlela ngephesenti elithile njengoba kushiwo kupharamitha. Isikhombi sivele sixhumanise la maphuzu ngomugqa bese senza iphethini efana ne-zigzag.
Amaphoyinti okubuyela emuva okutholwe yile nkomba imininingwane ewusizo kakhulu kubahwebi abaningi. Lawa maphuzu angathathwa njenge-swing high noma i-swing low. Abathengisi abakhomba izitayela ngokususelwa kuma-swing highs kanye nasolows swing bangasebenzisa lolu lwazi. Imakethe ingabukwa njengokuhamba kwesikhathi lapho i-swing highs and swing lows etholwa yinkomba ye Zigzag ihlala ikhuphuka. Ngokwesinye isandla, ukushibilika phezulu nezinkomba zokubhukuda eziwela njalo njengoba kukhonjiswe yinkomba yeZigzag kuyizimpawu zemakethe ye-bearish ethambekele.
Ukuphakama kwe-swing kanye nezinkophe zokubhukuda ezikhonjiswe yinkomba yeZigzag nakho kuyamaphuzu athakazelisayo noma nini lapho intengo ivakashela lelo nani lentengo. Intengo ingahle iqhume ngokuqinile ngokungaphezulu kokujikisa phezulu noma ngokuswayipha okuphansi, noma kungahle kubuye emuva njengoba ukushushuluza kwe-swing highs ne-swing lows kungabhekwa njengokusekelwa okuqinile noma ukumelana.
50 Isikolo sebanga eliphezulu
Isilinganiso esingu-50 esibonisa ukuhamba okulula (Isikolo sebanga eliphezulu) esinye isibonakaliso esiyingqayizivele abathengisi abasisebenzisayo ukukhomba inkomba yendlela. Abathengisi abaningi basebenzisa 50 I-SMA ukwahlulela ukuqondisa kwenkambiso.
Abahwebi bangasebenzisa indawo yentengo ngokuhlobene ne 50 I-SMA noma umthambeka we 50 I-SMA ukukhomba ukuqondisa inkomba.
Price ngaphezu 50 I-SMA ikhombisa inkambiso ye-bullish, ngenkathi intengo engezansi ibonisa ukuthambekela kwe-bearish. A 50 I-SMA esehlela kancane ibonisa ukuthambekela kwensiza, ngenkathi a 50 I-SMA eyehlela phansi ikhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
I-Oscillator ye-Awesome iyinkomba yesikhashana eyenziwe nguBill Williams.
Lesi sikhombisi se-oscillating sikhombisa ukuqondiswa kwendlela ngokubonisa imigoqo ye-histogram. Amabha we-histogram asuselwa mehluko phakathi kwe-SMA yesikhathi esingu-5 ne-SMA yesikhathi engu-34. I-SMA esetshenziswe kulesi sikhombisi isuselwa kubuncane bekhandlela ngalinye esikhundleni senani eliseduze.
Amabha amahle akhombisa inkambiso ye-bullish ngenkathi imigoqo engemihle ikhombisa inkambiso ye-bearish. Amabha angaphansi kunebhari yangaphambilini anemibala ebomvu kuyilapho imigoqo ephakeme kunebha yangaphambilini inombala oluhlaza.
Leli qhinga lokuhweba lidayisa ngokuqhekeka kusuka ekushintsheni kwe-swing highs kanye ne-swows lows ohlangothini lomkhuba.
Ukuphakama kwama-swing and lows lows kususelwa enkombeni yeZigzag. Amabhuzu ezimali kubhekwa njengokuhamba ngokuhamba ngokuhamba kokuthi ukuphakama kwe-swing and lows kuyaqhubeka ukukhuphuka noma ukuwa. Inkomba yesitayela iqinisekiswa yi 50 I-SMA kanye ne-Awesome Oscillator.
Use 50 Isikolo sebanga eliphezulu, intengo kufanele ibe sohlangothini oluqondile lwe 50 I-SMA ngokususelwe kuthrendi futhi kufanele yehle ibheke ngasekuqondisweni kwethrendi.
Ku-Oscillator Awesome, Imigoqo ye-histogram kufanele ihlale ngaphezulu kwe-zero ngesikhathi sokulinganisa kwe-bullish futhi ngaphansi kwe-zero ngesikhathi senkambiso ye-bearish.
Uma inkomba yendlela iqinisekisiwe ngokususelwe kule mibandela, ukufaka umyalo wokumisa kufakwa phezulu phezulu noma phansi lapho kulindeleke khona ukuqhekeka nokulahleka kokuma kokuguqukela okuphambene okuphezulu noma okuphansi. Inkomba yenzuzo ibekwa ku-1.5x ebekiwe engcupheni yokulahleka kokuma. Lesi siphindaphindi singalungiswa ngokuya ngesifiso sokudla sobungozi somthengisi. Izikhulisi eziphakeme kakhulu zingavuna inzuzo ephezulu kepha zingaba namanani aphansi wokuwina, ngenkathi abaphindeli abaphansi bengaba namanani aphezulu wokuwina kepha babe nezinzuzo eziphansi.
50-Isikolo sebanga eliphezulu (green)
Amabili Wemali: ngazimbili ezinkulu, ngababili abancane nababili abathandekayo
I-swing highs kanye ne-swing lows ngokusekelwe kwinkomba ye-Zigzag kufanele ikhuphuke njalo ikhombisa umkhuba we-bullish.
Intengo kufanele ibe ngaphezu kwe- 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
I- 50 I-SMA kufanele iconfele phezulu.
I-Oscillator ye-Awesome kufanele iphrinte imigoqo emihle.
Setha i-oda lokumisa on the jika phezulu ekuqinisekisweni kwemibandela engenhla.
Setha ukulahleka kokumisa ku-swing low ngemuva kokuphakama okuphezulu lapho i-oda yokumisa isuselwa khona.
Hlela inkomba yenzuzo ku-1.5x ubungozi ekulahlekelweni kokuma.
Iziloba zokushushuluza nezokujikisa ngokususelwa enkombeni yeZigzag kufanele zihlale ziwa zibonisa inkambiso ye-bearish.
Intengo kufanele ibe ngaphansi kwe- 50 Isikolo sebanga eliphezulu.
I- 50 I-SMA kufanele iwele phansi.
I-Oscillator ye-Awesome kufanele iphrinte imigoqo engemihle.
Setha i-oda yokumisa ukuthengisa ku-swing low ekuqinisekisweni kwemibandela engenhla.
Setha ukulahleka kokumisa ku-swing high ngemuva kokujikisa okuphansi lapho i-oda yokumisa isuselwa khona.
Ukubeka i-oda lokungena lokumisa kuma-swing highs noma ku-swing lows ngesikhathi semakethe ethambekisayo kuyindlela esetshenziswa ngabaningi beshadi futhi nabathengisi abasebenza ngamanani. Lokhu kungenxa yokuthi lolu hlobo lwamasu luyindlela ephezulu yokuphamba.
Noma kunjalo, ukuhlonza ukuphakama kwama-swing kanye nama-swing lows kuvame ukuba nzima kubahwebi abasha. Leli qhinga lenza lula inqubo ngokukhomba izimbotshana zabathengisi. Kuhlunga futhi kuhweba ngamabili ngamabili wemali angahambi ngokuqinile. Lokhu kukhiqiza ukusethwa kokuhweba ngamathuba amakhulu kakhulu.
Ukuhweba lolu hlobo lwecebo kungakhiqiza imiphumela emihle kubahwebi abangafuna ukuhweba ngamaphuzu okuswayipha ezimakethe ezihamba phambili.
I-EMA MACD Congestion Breakout Forex Ukuhweba Isu
Izindawo zeCongestion zingumthombo omuhle wokuhweba okungenza kube khona.
Imakethe yakhiwe ngezigaba ezimbili - ukunwetshwa nokuzikhulula. Ama-congestions awuhlobo lokuzenzelwa lapho esikhundleni sokubuyisa kusuka ekuthambeni, imakethe iqala ukuba nebanga elincane lapho intengo ivame ukuhlala ngaphakathi isikhashana.
Ama-congestions luhlobo lwesimo semakethe abahwebi abangalugwema ngandlela zonke. Lezi zimakethe zinokuqina okungatheni futhi zi-choppy kakhulu. Ukuhweba ngaphakathi kwebanga elinjalo elincanyana kwenza kube nzima ukwenza inzuzo emakethe.
Noma kunjalo, Abathengisi be-savvy bayazi ukuthi kunethuba lokuhweba noma nini lapho ukuhlangana kwezimakethe kubonakale. Lokhu kungenxa yokuthi abafuni ukuhweba ngaphakathi kwendawo yokuhlangana kodwa kunalokho, bafuna ukuhweba ngokuqothula kusukela ekuxinaniseni okunjalo. ngokuvamile, Ukuqhekeka kokuqunjelwa kuqhuma ngokushesha komfutho. Lokhu kungenxa yokuthi abathengisi abaningi bahlala emaceleni ngesikhathi sesigaba sokuhlangana. Lapho nje ithuba lokuhweba selitholakala, i-chunk enkulu yemakethe ingathengisa ngevolumu ephezulu futhi ngaleyo ndlela ibangele ukunyakaza okuqinile kwamanani entengo.
Leli su liyachuma kulezo zimo. Ivumela abathengisi ukuthi bahlelele ngokuhlelekile kokuqhekeka kusuka kundawo yokuhlangana besebenzisa inhlanganisela yezinkomba eziqinisekisa ukwahlukana okunjalo.
Izimpawu ze-Exponential Moving Averages Signals
Isikhombisi se-Exponential Moving Averages Signals siyinkomba yangokwezifiso enikeza amasiginali wokuhweba usebenzisa inhlanganisela ye-Exponential Moving Averages (UMAMA).
Lesi sikhombisi sinikeza amasiginali wokuhweba asuselwa ku-crossover yama-EMA amabili. Inkomba iveza kahle umcibisholo endaweni lapho kwenzeke khona i-crossover, ekhomba ukuqondiswa kwesiginali yezohwebo.
Isikhombi Somdala se-MACD siyinkomba ngokwezifiso esekelwe ohlelweni lweGreat Impulse System njengoba lwakhiwa u-Alexander Old. Kususelwa enkombeni yendabuko ye-MACD, Nokho, lokhu kucushwa kwe-MACD kushintshiwe.
Lesi sikhombisi siyinkomba ye-oscillating ekhombisa ukuqondiswa kwendlela esetshenziswa kuma-histograms kanye nomugqa wesiginali. Ama-histogram amahle akhombisa umkhuba we-bullish, ngenkathi ama-histogram amabi ekhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Ama-Crossovers phakathi kwemigoqo ye-histogram nomugqa wesiginali futhi akhombisa ukubuyela emuva kwesimo.
Imigoqo ye-histogram yenkomba ibuye futhi iguqule imibala ngokuya ngokuqondiswa kwendlela. Imigoqo eluhlaza ikhombisa ukuthi izinkunzi sezithathe izintambo nokuthi imakethe iyacindezelwa ukuba inyukele phezulu. Imigoqo ebomvu ikhombisa ukuthi amabhere asezithathile nokuthi imakethe icindezelwa ukuba yehle. Ngakolunye uhlangothi imigoqo eluhlaza okwesibhakabhaka iyaphrintwa noma nini lapho izimo ze-bar eluhlaza nobomvu zingakafinyelelwa.
Leli qhinga lokuhweba lidayisa ngokuqhekeka okuphuma ezindaweni ezibucayi eziqinisekiswe yi-confluential of the Exponential Moving Averages Signals kanye ne-MACD Old Inkomba.
Eshadini lentengo, indawo yokuhlangana kufanele ibonwe. Lokhu kuboniswa ngohla lwamanani entengo anamakhandlela abonisa ukungaqondakali. Ibanga lohla, ngcono.
Intengo kufanele ivele iphume ebangeni. Njengoba intengo iphuma kububanzi, Inkomba ye-Exponential Moving Averages Signals kufanele iphrinte isiginali yokungena ekhombisa indlela eya lapho iphuma khona. Lokhu kufanele futhi kuqinisekiswe ngokuwela ngaphezulu kwesibonakaliso se-MACD somdala ngaphezulu kwe-midline. Umbala wemigoqo ye-MACD i-Old Ageogram kufanele futhi uqinisekise ukuqondiswa kokuhlukana.
ZZ_YZ-MDAC_ELDER_1-1000.ex4 (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Indawo yomhlangano kufanele ibonwe eshadini lentengo.
Intengo kufanele iqhume bese ivala ngaphezulu kwendawo yokuhlangana.
Isikhombi se-Exponential Moving Averages Signals kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phezulu.
Ama-histogram ama-MACD amadala kufanele abe aluhlaza okotshani obonisa ubukhulu bezimakethe ze-bullish.
Ama-histogram ama-MACD amadala kufanele awele ngaphezulu kwe-zero.
Izimpawu ze-bullish ezingenhla kufanele zihambisane kakhulu.
Setha ukulahleka kokumisa ngezansi maphakathi komkhawulo wesizinda.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Exponential Moving Averages Signals iphrinta umcibisholo okhomba phansi.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ama-histogram we-MACD Omdala ewela ngaphansi kwe-zero.
Intengo kufanele iqhume bese ivala ngaphansi kwendawo yokuhlangana.
Isikhombi se-Exponential Moving Averages Signals kufanele siphrinte umcibisholo okhomba phansi.
Ama-histogram ama-MACD amadala kufanele abe bomvu abonisa umbala we-bearish emakethe.
Ama-histogram ama-MACD amadala kufanele awele ngaphansi kwe-zero.
Izimpawu ze-bearish ezingenhla kufanele zihambisane kakhulu.
Setha ukulahleka kokumisa ngaphezulu maphakathi kwendawo yokuhlangana.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho i-Exponential Moving Averages Signals iphrinta umcibisholo okhomba phezulu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ama-histogram we-MACD Omdala ewela ngaphezulu kwe-zero.
Ukuthengisa kuma-congestion zone Breakouts kungenzeka kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuhweba. Lokhu kungenxa yokuthi ukuhweba ngalezo zimo kuvumela isilinganiso esikhulu kakhulu somvuzo.
Izindawo zokuxinanisa okungamakhompiyutha zivumela abathengisi ukuthi babeke ukulahleka okuqinile kokuma. Abanye bangabeka ngisho nokulahleka kokumisa ngakolunye uhlangothi lwesimo sokuhlangana ngoba izindawo eziningi zokuxinana ziqinile ukuze zikwazi ukukuvumela. Bese, ngemuva kokuhlukana, imakethe ivame ukwanda ngokushesha ibheke lapho iqhekeza khona ikhefu. Lokhu kuvumela abathengisi ukuthi bathole okuningi, ngengozi encane kangako.
Izindawo zokuhweba zokuxinanisa ngokuqinisekiswa nokuguqulwa kwezinkomba ezithembekile zithuthukisa amathuba wecebo. Leliqhinga lenza lokho.
Konke 5 amasu asebenza kahle njengecebo lokuphuma. Isihluthulelo sokuhweba ngamasu lawa ngokunenzuzo ukukhomba isu elifanele lesimo semakethe othengisa kulo.
Kukhona njalo ithuba lokuhweba imakethe noma ngabe sinjani isimo. Umbuzo uma unolwazi lobuchwepheshe lokuhweba isimo samakethe esikhona.
Khomba isimo esifanelekile semakethe nezinsizakalo zokuhweba ezitholakalayo bese usebenzisa isu elifanele. Uma wenza lokhu kaningi, ke kufanele ube inzuzo.
Isiqephu esedluleIsikhombi seWisman HTF MT5
Isihloko esilandelayoI-ID Qhathanisa i-HH LL ne-Delta Base MT5 inkomba
Trend Prediction Breakout Forex Ukuhweba Isu
Trend Strength Breakout Forex Ukuhweba Isu
Zone Momentum Breakout Forex Ukuhweba Isu
Ibhokisi Breakout Forex Ukuhweba Isu
123 Momentum Breakout Forex Ukuhweba Isu
CCI MA Momentum Breakout Forex Ukuhweba Isu
Ukuhweba Forex Nge EUR / USD
UTim Morris - Januwari 26, 2022 0